Ciidamadii ugu badnaa oo reer Ukraine oo isku dhiibay Militari... | Universal Somali TV
Wasaaradda Difaaca Ruushka ayaa maanta sheegtay inay isa soo dhiibeen ciidamadii ugu dambeeyay ee ku harsanaa warshadda birta sameysa ee Azovstal ee Magaalada Mariupol, tani oo soo afjareysa iska caabintii ay Ciidamada Ukraine ka wadeen Magaalada Dekedda leh ee Mariupol.
Wasaaradda ayaa sheegtay in tan iyo Isniintii ay isa soo dhiibeen 9,59 askari, taasoo macnaheedu yahay in Militariga Ruushka ay haatan si buuxdo ula wareegeen gacan ku haynta magaalada dhacda Koonfurta Ukraine.
Wasaaradda ayaa bayaan ku sheegtay in 6,94 askari oo Xoogaga Azov ah oo gabaad ka dhiganayay warshadaasi ay isa soo dhiibeen 24-kii saac ee la soo dhaafay, waxaana ka sii horeysay 2,65 askari oo Isniintii iyana isu soo dhiibay Militariga Ruushka ee hareereeyay xeendaabka warshadaasi.
Moscow ayaa sheegtay Xoogaga Azov oo ay ugu yeertay Naaziyiin in lagu baari doono saldhigyada ay ciidamadeeda ku leeyihiin magaaladaasi.
Saraakiisha Ukraine ayaan faah faahin ka bixin tirada ciidamadooda ee isu dhiibay Militariga Ruushka, waxaase la ogyahay tallaabada ay isu soo dhiibeen inay ka dambeysay, soo jeedin ka timid dhanka Ruushka.
Xoogaga Azov ayaa horaantii bishii March bilaabay inay Ciidamada Ruushka kula dagaalamaan Magaalada Mariupol, markaas oo Ruushku waday hawlgalo uu ku go'doominayo magaaladaasi.
Mariupol ayaa noqonayso magaaladii ugu weyneyd ee dalka Ukraine, oo ay si rasmi ah ula wareegaan Ciidamada Ruushka, tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka ee dalkaasi, 24-kii bishii February ee sanadkan.
Kan-xigaMareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed o...
Kan-horeCiidamada Israel oo toogasho ku dilay...
65,220,990 unique visits